Usoro ihe omuma na-akwado usoro kachasị mma iji mepụta ozi site na weebụsaịtị
Ọ bụrụ na ị na-achọ iwepu data site na ibe weebụ wee chọọ ịkwalite azụmahịa gị , ị ga-amụta ụfọdụ asụsụ mmemme. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ iji nyocha data site na blọọgụ na saịtị, mana asụsụ mmemme na-eme ka ọ dịkwuoro gị mfe iwepụta ozi na-enweghị isi na nke na-ezighị ezi n'emebighị àgwà. Ịchọta asụsụ kachasị maka nchịkọta weebụ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị maraworị asụsụ mmemme, ị ga-enwe ike wepụ weebụsaịtị dị iche iche ngwa ngwa - computer consultant network saratoga.
N'okpuru bụ ụfọdụ n'ime njirimara a asụsụ mmemme kwesịrị inwe:
Flexibility PHP bụ asụsụ dị mfe ma dị mfe iji mee ihe. Ọ bụ ezigbo asụsụ mmemme kachasị mma.
Ikike ịzụta ọdụ data Ọ ga-enwe ike ịkụkwa data dị iche iche n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Egwuregwu na-arụ ọrụ Python na PHP bụ isi asụsụ mmemme nke na-enyere aka ịwasaa ibe weebụ gị ma melite ebe nrụọrụ weebụ search engine gị.
Maientinability C ++ bụ asụsụ mmemme na-adị mfe na-adịghị mkpa nke na-adịghị mkpa ọhụụ ọ bụla.
Enweghi ike ichikota "A ga - ehichapụ weebụsaịtị naanị mgbe ejirila asụsụ mmemme gị rụọ ọrụ ngwa ngwa ma chọọ naanị koodu ole na ole iji malite na nchịkọta data .
Ụdị ike HTML bụ asụsụ zuru ezu nke na-enye ọtụtụ nhọrọ nchịkọta data. Ọ na-enye aka ichipe HTML akwụkwọ ma nweta ihe ndị ị chọrọ ozugbo.
Asụsụ kachasị mma maka nchịkọta weebụ na ntinye data:
Node. js dị mma na ebe nrụọrụ weebụ na blọọgụ na-awagharị ma na-eji usoro mgbagwoju anya rụọ ọrụ gị. A na-akwado asụsụ a maka ebe nrụọrụ weebụ buru ibu na ọrụ mmepụta data.
C na C +::
C na C + bụ asụsụ abụọ a ma ama maka nchịkọta weebụ.Ha dị mma maka azụmahịa na obere blọọgụ ọhụrụ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịwa ibe weebụ, ị gaghị ahapụ C na C ++.
PHP bụ otu n'ime asụsụ ndị a ma ama na nke dị ịtụnanya maka mmepụta data. Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ na onye mmemme, mana nkwado na-adịghị ike maka ịme ihe ọtụtụ bụ isi nkwụghachi azụ ya. N'ihi ya, PHP adịghị adaba maka ọrụ mgbagwoju anya data.
Eke Ọgba dị ka ihe niile na-eme ka ntanetị weebụ na arụ ọrụ nchịkọta data nụ. Egwu na Egwu Mara Mma bụ ụlọ ọrụ abụọ a ma ama na Eke Ọgba.
Asụsụ kachasị mma maka nchịkọta weebụ:
PHP bụ asụsụ ntụgharị asụsụ, ọ dịghịkwa mkpa icheta koodu mgbagwoju anya iji ya. Ọ bụ asụsụ dị mma maka nchịkọta weebụ nke na-eme ka e nwee nsonaazụ ọma. PHP na-eme ka ọ dịrị gị mfe iwepụ ebe nrụọrụ weebụ dị ike na inweta data bara uru n'oge ọ bụla.
Ozugbo ị matara banyere ihe ọma na nke dị njọ n'akụkụ niile nke mmemme, ọ ga-adị mfe iji wepu data sitere na ebe nrụọrụ weebụ na isi.Na PHP, ị nwere ike nyochaa ụzọ njem, ebe e-commerce, akwụkwọ akụkọ na blọọgụ onwe. Asụsụ a ọ bụghị nanị na ọ na-emepụta data dị egwu kama ọ na-agbaghakwa saịtị gị ma mee ka njinigwe search engine ya dị mma.